--Lọ - Hands Off!
Nnọọ on Aka - kwụsị mmegbu ụmụaka
Anyị raara onwe anyị nye igbochi na ichebe megide ime ihe ike nke mmekọahụ megide ụmụaka.
Anyị nwere obi ụtọ banyere onye ọ bụla na-akwado anyị ma chọọ ichebe ụmụaka na-egbochi ha.
Soro ndi otu
Ihe nchekwa anyị nwere ihe karịrị akwụkwọ nyocha akwụkwọ akụkọ 5000 maka imesi ụmụaka ike.
Nye onyinye ugbu a maka ezigbo ihe kpatara ya!
Onyinye ọ bụla na-enyere aka iru ọtụtụ mmadụ ma nyere ọtụtụ ụmụaka aka.
AKW FKWỌ ANY F
Childrenmụaka na ndị okenye kwesiri ị mata akara aka nke mmekorita nwoke na nwanyị na ndị na-agagharị agagharị, ndị mmekpa ahụ na ndị na-eme ihe gbasara mmekọahụ n'oge kwesịrị ekwesị. Anyị chọrọ inye onyinye na nke a site na ọrụ agụmakwụkwọ na mgbochi.
Emezuru na Jenụwarị 2021
Ndị na-enyere anyị aka na-enyere anyị aka kwa ụbọchị
Anyị etinyela aka na nchebe ụmụaka ruo ọtụtụ afọ
Anyị na-arụ ọrụ na akwụkwọ maka ụmụaka ndị dị afọ 3-7 iji chebe ha pụọ ​​na ime ihe ike n'ụzọ mmekọahụ. Akwụkwọ a ga - eme ka mgbochi ụmụaka dịrị ndị nne na nna mfe, kamakwa ndị nkuzi na ndị niile na - arụrụ ụmụaka ọrụ kwa ụbọchị.
Mkpakọrịta ahụ "Aka Aka - Kwụsị Mmegbu ụmụaka" na-arụ ọrụ iji hụ na enwere ike iwepụta akwụkwọ a n'efu maka ebe a na-elekọta ụmụaka, ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna.
Iji ruo ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ ọrụ nlekọta ụmụaka na 56 na Germany, 000 na Switzerland na 15 na Austria na ihe karịrị nde ụmụaka, anyị chọrọ nkwado ego maka ụgwọ obibi na nkesa. Na mba ndị na-asụ German enwere ihe dịka 000 ụlọ akwụkwọ praịmarị na elementrị nwere ihe dị ka ụmụ akwụkwọ 10 na klas mbụ bụ ndị kwesịkwara agụmakwụkwọ.
Na weebụsaịtị anyị ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara mkpakọrịta anyị yana na www.leoloewe.com mbụ mmetụta nke akwụkwọ oru ngo.
Otu ndị isi nke mkpakọrịta ahụ, nna na nwa amaala,
Ndị ọrụ afọ ofufo
oru ugbu a
Ọ naghị arụ ọrụ ma ọnweghị gị!
Ọ dị n’aka gị!
95% nke onyinye niile na-aga ozugbo ụmụaka
Onyinye gị maka nchebe ụmụaka
Onyinye niile na-aga n'ihu na mgbochi nke ime ihe ike nke mmekọahụ
Nweta $ 15,000
Mgbaru $ 150,000
ANY COM KWES COMR TO KWES TOR THIS A
Ọbụna taa ọtụtụ mmadụ na-ele ụzọ ọzọ anya ma a bịa n'ihe egwu a, yabụ isiokwu taboo.
Site na oru anyi anyi choro itinye aka n'eziokwu na obughi nani umuaka kamakwa ndi okenye nwere ike ighota ihe omuma nke mmekorita nwoke na nwanyi dika ndi na-eme ihe ojoo, ndi ojoo na ndi na-eme nmekorita nwoke na nwanyi n'oge ma meghachi omume. Ekwesiri inye ha ikike ikwu banyere ya (mana ya na onye mejọrọ n'onwe ya agaghị enwe ike, dịka nke ahụ ga-adọ ya aka na ntị)
Okwesiri ighota na ikpe ziri ezi abughi ihe ozo. Ka o sina dị, onye ọ bụla kwesịrị ịmara na ha nwere nsogbu ma ọ bụ nwee ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na enwere mmetọ nke mmegbu, nke a ma ha agwaghị ndị ọrụ nchedo ụmụaka ma ọ bụ ndị uwe ojii wird.
Ọ na-agabiga ebe ọ bụla na obodo anyị
Na weebụsaịtị Hands Off anyị na-egosi oke isiokwu a na obodo ọ bụla ma ọ bụ obodo ọ bụla dị na Germany, Austria, Switzerland na ụwa niile.
Ihe nkiri sistemụ ”Arụ ọrụ shuga", Na onye isi ihe nkiri Nadja Uhl ma ọ bụ ihe nkiri ahụ"Partychụ nta"Nọchite anya ihe ịma aka ndị a nke ọma. O di nwute na onye isi oru German mbu, Thomas de Maizière, nwere akwukwo"Saxon apịtị”A ga-ehichapụ niile ọba akwụkwọ media ARD.
Egosiri ihe nkiri na 20: 15 elekere na mkparịta ụka na-esote Sandra Maischberger tụlere n'ụzọ zuru ezu. Wilhelm Röhrig, UBSKM, kwudịrị na ya makwaara maka ogbugbu ụmụaka.
NỌMBA, DATA, Eziokwu
Ijeri dolla azụmahịa
Ihe karịrị ụmụaka 3 dị ugbu a bi na ndọrọ n'agha (ọnụ ọgụgụ nke ndị a na-akọghị akụkọ ga-abụ nke ka elu karịa, agbanyeghị). Industrylọ ọrụ na-enye ihe ngosi nke ụmụaka na vidiyo kwekọrọ na ya Ijeri $ 30 (ọnụọgụ nke enweghị akwụkwọ ekwesịghị ịdị elu ebe a) a ga-emerịrị.
Ọ NA-AD HAR EV N'ebe ọ bụla - ọ bụghị na mpaghara m!
Ọtụtụ ndị ka kwere nke a. Mana ọnụọgụgụ ahụ na-asụ asụsụ dị iche: Mmekọahụ ụmụaka metụtara n'etiti anyị. Akụkụ nke ọha mmadụ a na-achọghị na ọkwa nke na-eme ka okwu ghara iwe na iwe - ma kwesịrị ịgba anyị ume ime ihe.
Na Germany e nwere ihe eze banyere 15,000 mgbasa ozi mmetọ ụmụaka, ma ọnụọgụ nke ndị a na-akọghị akụkọ ka elu. WHO atụmatụ na-egosi na ọ bụ ihe dị ka 1 nde metụtara ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke na Germany, ọ bụrụ na otu n'ime 18 nde Childrenmụaka na ndị na-eto eto na Europe.
Nọdụ ala na klas ụlọ akwụkwọ ọ bụla na Germany Childrenmụaka 1-2ndị mmegbu metụtara.
Banyere 9 n'ime okwu 10 mmetọ ụmụaka ka na-achọpụtabeghị.
80-90% nke ndị kpara arụ ahụ bụ nwoke, 10% Nwanyi.
NKPOTR CH AH PRR CH NWA
Iji mee nke a, anyị na ụlọ ọrụ dịka Thorn.org, nke ndi Demi Moore na Ashton Kutcher choputara ma obu Underzọ ụgbọ oloko n'okpuruala ANYA site n'aka Bal Bald, nke hapụgoro ihe karịrị ụmụaka 1300 site na ndọkpụ n'agha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-echebe ụmụaka n'ụlọ na mba ofesi.
Ọ bụkwa ihe anyị na-achọ ka e bulie ụkpụrụ nke adịghị ike azụ. KWURU na nwanyị ọ bụla nke e metọrọ mgbe ọ bụ nwata kwesịrị inwe ohere ịkọrọ onye mejọrọ ya.
Ekwesịrị ịgwa ndị uwe ojii niile okwu mkparị na Interpol, BKA ma ọ bụ ndị ikike ndị ọzọ ma mesịa ha ihe, nke emere ugbu a na-erughị 10% nke ikpe. Maka nke a, A na-agbanwe iwu njigide data ngwa ngwa o kwere omume, maka gịnị a na-akpọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu ihe a metụtara nsonazụ iwu. Na Switzerland, a ka nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụsịtụrụ ahịrịokwu maka ijigide foto esemokwu ụmụaka. Na Germany, enwere ike ịta onye na-eme aka nhịahụ ntaramahụhụ karịa onye na-emegbu ya.
Na Poland amanye mmanu chemical castration. Ọ bụ ezie na nke a yiri ka ọ kachasị njọ, ma ọ dịkarịa ala ihe karịrị 50% nke ndị niile na-eme ihe ọjọọ nlọghachi. N’ebe a kwa, a na-agwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha were ike mmanye n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge eji eji ma ọ bụ ọgwụgwọ ka ndị kpara ike ahụ wee nweta nlekọta mmụọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụ akụkọ na-adịghị agwụ agwụ chọrọ ka a kwụsị ASAP!
Mgbochi bụ otu n'ime nchegbu kachasị. Anyị na-akwado ịhazi egwuregwu na ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ na-egosi ụmụaka na ọ bụ naanị ha nwe ahụ ha.
Anyị na-arụ ọrụ n'ịmepụta ụwa "Amber Alert“Ya mere, na, dị ka na US, ọ bụla ịtọrọ mmadụ nwere ike kọọrọ. Nke a bụ ozi mkpu na akpaghị aka na mkpu mkpu nke na-egosipụta n'ime nkeji ole na ole na ekwentị ọ bụla nke ndị niile nọ n'ime ụfọdụ redio nke ebe ịtọrọ mmadụ. Nke a gosipụtara na njirimara nwatakịrị ahụ yana nkọwa na nkọwa nke ịtọrọ mmadụ (dịka akwụkwọ ikike ikike).
Site na ndị ọka iwu pụrụ iche na ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị na-enyere aka na-echebe ụmụaka nọ n'ihe egwu site n'aka ndị na-eme ihe ọjọọ. Na mgbakwunye, anyị na-ekpesi ndị na-eme ihe ike ikpe ka ha nata ntaramahụhụ ziri ezi ha ma ndị ahụ metụtara nwetara ikpe ziri ezi.
95% nke onyinye gị na-aga ozugbo na nchedo ụmụaka!
I nwere ike inye onyinye Ebe a
© 2021 Aka--off.org . Echekwara ya niile.
Soro Ihe Omume ahụ